အကောင်းဆုံးထုပ်ပိုးမှုအကြံပေးချက် ၁၅ ခု။ - News-Phu Ly Bao Co. , Ltd
အစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးထုပ်ပိုးအကြံပေးချက်များ 15 ။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လား စစ်ဆေးပါ။ သွားတိုက် စစ်ဆေးပါ။ နေကာကွယ်? Doh! သင်စိတ် ၀ င်စားမှုရရန်အတွက်သင်လိုအပ်သောအရာများကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။
ပေါ့ပါးတဲ့အဝတ်အစားတွေထုပ်ပြီးမင်းရောက်တဲ့အခါသူတို့မှာအစွန်းအထင်းတွေတွေ့ဖူးသလား။ ဒီပြproblemနာကိုနောက်တဖန်ဘယ်တော့မှမ။ ပထမတစ်ခုအနေဖြင့်သင်၏အလင်းရောင်ရှိသောအဝတ်အစားများအပြင်ဘက်တွင်ထုပ်ပိုးထားကြောင်းသေချာအောင်ပြုလုပ်သင့်သည်။ ဒုတိယအနေဖြင့်ဟိုတယ်တွင်သုံးနိုင်သောရေချိုးခန်းအဖုံးများကိုကိုင်ထားပြီးသင့်ဖိနပ်၏အောက်ခြေကိုဖုံးရန်အသုံးပြုပါ။
သင့်အားလပ်ရက်ခရီးရောက်ရန်မရောက်ရှိပါနှင့်။ နေရာချွေတာခြင်းနှင့်တွန့်ခြင်းများကိုရပ်တန့်ရန်သင့်အဝတ်အစားများကိုခေါက်မည့်အစားလှိမ့်ချပြီးနောက်လေဟာနယ်ချုံ့အိတ်များထဲသို့ထည့်ပါ။ ဤအိတ်များကိုအသုံးပြုရန်သင်၏အဝတ်အစားများကိုထည့်။ အိတ်ကိုတံဆိပ်ခတ်ပါ။ ထို့နောက်လေထဲမှညှစ်ထုတ်ပါ။ ဒါကသင့်ရဲ့ခရီးဆောင်အိတ်ထဲမှာနေရာတွေအများကြီးပိုထွက်လာမှာဖြစ်ပြီးတွန့်တွန့်မှုကိုတားဆီးလိမ့်မယ်။
နောက်ထပ်ကောင်းမွန်သောထုပ်ပိုးမှုဖြေရှင်းနည်းမှာ Cube များကိုထုပ်ပိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်သင်၏ပစ္စည်းများကိုခွဲခြားရန်နှင့်သင်ရောက်သည့်အခါအရာရာကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာရှာဖွေရန်ကူညီသည်
ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်လက်ဆွဲသေတ္တာတစ်လုံးစီတိုင်းကိုသင်တတ်နိုင်သမျှအသုံးပြုပါ။ ထိပ်များ၊ အတွင်းခံများ၊ ခြေအိတ်များနှင့်အခြားသေးငယ်သောပစ္စည်းများကိုလှိမ့်ပြီးဖြစ်နိုင်သမျှနေရာများပြည့်နေစေရန်သင်၏ဖိနပ်ထဲသို့ထည့်ပါ။
သင့်အဝတ်အစားများလတ်ဆတ်နေစေရန်အထူးအရေးကြီးသည်၊ potpourri အိတ်ငယ်တစ်ထည်၊ အ ၀ တ်အထည်အခင်းစာရွက်များသို့မဟုတ်ရနံ့အံဆွဲနံရံများကိုယူခြင်းအားဖြင့်၊ သင်၏အဝတ်အစားများကိုခရီးတစ်လျှောက်လုံးချိုမြိန်နေစေမည်။
7. Ziplock အိတ်
မင်းရဲ့အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတွေ၊ ကေဘယ်ကြိုးတွေ၊ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုတခါတရံဘယ်လိုစုစည်းလေ့ရှိသလဲ။ သူတို့ကိုအခြားငါတို့ကဲ့သို့သူတို့ကို Stuff? ကောင်းပြီ၊ သင်ထုပ်ပိုးမှုကိုစီစဉ်ချင်ရင် ziplock အိတ်တစ်ချောင်းယူပါ။ ဖုန်းအားသွင်းစက်၊ ကင်မရာအားသွင်းစက်၊ adapters၊ နားကြပ် - ပလတ်စတစ်အိတ်များ (လက်ဆွဲအိတ်များအတွက်သင်နှင့်အတူတူပါပဲ) ယူပါ။ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ အိမ်သော့များ (အိမ်သော့များ၊ ), ဆေးနှင့်အခြားချောင်ဆက်စပ်ပစ္စည်း။ သင်တစ် ဦး gadget ကိုချစ်ကြလျှင်, သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းခရီးသွားဆက်စပ်ပစ္စည်းများထွက်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
သင်၏ဖိနှိပ်ထားသောအမှုန့် (သို့) မျက်လုံးအရိပ်သည်သင်၏ခရီးစဉ်အတွင်းကွဲအက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အမှုန့်နှင့်အဖုံးကြားရှိပြားချပ်ချပ်ဝါဂွမ်းပြားကိုချထားပါ။
၎င်းသည်အငွေ့ပျံဖွယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်စေ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာသိပ္ပံဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်စေ၊ ခွေးတစ်ကောင် ဦး စားပေးသောခရီးသွားလမ်းညွှန်ဖြစ်ဖြစ်၎င်းကိုသင်၏ခရီးမတိုင်မီ download လုပ်ပါ။ အိမ်တွင်သင်၌စာရွက်တစ်ရွက်ရှိနေလျှင်ပင်၊ သင်၏အားလပ်ရက်အတွက်နေရာနှင့်အလေးချိန်ကိုချွေတာပါ။ သင်၏perfectlyုံအနေအထားရှိသောကမ်းခြေကုလားထိုင်မှဇာတ်လမ်းထဲပြန်ဝင်ရန်ဝိုင်ဖိုင်ကိုမမှီပါနှင့်။ ၎င်းသည်ရေထုဖုံးအုပ်ထားသောကိရိယာပေါ်တွင်သေချာပါစေ (သင်၏ချစ်မြတ်နိုးရသော e-reader, ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်အတွက်အထူးလေးနက်သောကာကွယ်မှုအတွက် Otterbox ကိုကြည့်ပါ) ။
အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုလုယက်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်၊ ထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်အတွက်ငွေသား၊ သင်၏ဟိုတယ်အခန်းရှိအဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုသင်စိတ်ပူမိပါက၎င်းကိုနေရောင်ဖျော့ဖျော့ဖျော့အိုးထဲတွင်ဝှက်ထားပါ။ roll up notes empty notes notes lip empty empty empty empty empty empty empty empty empty lip lip lip lip lip lip lip lip lip lip lip You lip lip lip lip You You lip lip lip lip lip lip lip lip lip lip lip lip lip empty lip lip lip lip lip empty lip lip lip lip roll များကိုလည်းထပ်တိုးထားသောပေါင်းစပ်ထားသည့်မှတ်စုများကိုဖုံးကွယ်ရန်အချည်းနှီးသော lip balm ကွန်တိန်နာများကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
အချို့သောခရီးဆောင်အိတ်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးသင်အလေးချိန်ကန့်သတ်ချက်သို့ရောက်ရန်မည်မျှနီးကပ်သည်ကိုသိရန်သင့်ခရီးဆောင်ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်သင်၏အိတ်များကိုသေချာစွာချိန်ပါ။ သင်ကန့်သတ်ချက်နှင့်နီးနေလျှင်၊ လေးလံသောပစ္စည်းအချို့ကို ၀ တ်ဆင်ထားခြင်းသို့မဟုတ်သင်ထုပ်ပိုးထားသည့်အရာကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကိုစဉ်းစားပါ။
စျေးအကြီးဆုံးဒီဇိုင်နာခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာကို ၀ ယ်ခြင်းသည်သင့်အားအဆင့်မြှင့်လိမ့်မည်ဟုမယူဆပါနှင့်။ ၎င်းအစားလေဆိပ်နှင့်သင့်ခရီးသွားများအတွက်သူခိုးများကိုဆွဲဆောင်ရန်ပိုများသည်။ ပို၍ ထင်ရှားသောအရာများဖြစ်ခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးသည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုသွားခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။ သင်က hardshell ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာတစ်လုံးကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်ထုပ်ပိုးမှုကိုသင်မစတင်ခင်မှာဒီအလေးချိန်လေးကီလိုဂရမ်အထိတက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စျေးကြီးရတာအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။
ခရီးဆောင်အိတ်များသည်လေကြောင်းလိုင်းနှင့်လေကြောင်းလိုင်းအလိုက်ကွဲပြားသည်။ လေဆိပ်ကိုမရောက်ခင်သင့်ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုသိထားပါ။ အချို့သော၊ သို့သော်သယ်ဆောင်သူအားလုံးကသင့်အားအိတ်နှစ်လုံးဖြင့်စစ်ဆေးခွင့်ပြုမည်။ အလေးချိန်သည်ကွဲပြားနိုင်သည် (အချက် ၁၂ ကိုကြည့်ပါ) ။ သင်ခရီးဆောင်စရိတ်ကိုနားလည်ပြီးတံခါးဝတွင်အကုန်အကျများခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ငါတို့ရဲ့လက်အိတ်လမ်းညွှန်ကိုလည်းဖတ်ချင်လိမ့်မည်။
သင်နှင့်၎င်း၏အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကြားတွင်သင့်ခရီးဆောင်အိတ်ကိုရှာဖွေနေသည့်လေဆိပ်အိတ်များတွင်ရှိသောခရီးသည်တင်လေယာဉ်အကျပ်အတည်းနှင့်ကြုံတွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ခရီးဆောင်အိတ်ကိုခရီးဆောင်အိတ်များဖြင့်တံဆိပ်ကပ်ပြီးလူအုပ်ထဲတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက်အနည်းငယ်ပြုပြင်ပါ။ ၎င်းကိုဖဲကြိုးများ၊ စတစ်ကာများသို့မဟုတ်ရောင်စုံဖိနပ်များဖြင့်အလှဆင်ပါကချက်ချင်းမှတ်မိနိုင်သည်။
ငါတို့ရဲ့ခရီးဆောင်အိတ်ကိုဘယ်လောက်ပဲအလှဆင်ပါစေတစ်ခါတစ်ရံမတွေးဝံ့စရာဖြစ်လာတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံအိတ်များပျောက်နေသည်။ သင်၏အဖိုးတန်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်သင်၏လက်ဆွဲအိတ်ထဲတွင်ရှိနေပြီးသင်၏လက်ဆွဲအိတ်ထဲတွင်အဝတ်အပိုအလဲများကိုအမြဲတမ်းထုပ်ပိုးပါ။ အစားထိုးအဝတ်အထည်များ ၀ ယ်ရန်သင်ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်ဆိုင်များသို့အလျင်အမြန်သွားစရာမလိုတော့ပေ။ သို့သော်သင်၏လက်ဆွဲအိတ်ထဲရှိအရာအားလုံးကိုမလှုပ်ရှားမီ၊ သင်၏အခန်းအိတ်ထဲတွင်မပါ ၀ င်သောဤထူးခြားသည့်ပစ္စည်းအချို့ကိုသင်အံ့သြသွားနိုင်သည်။